IRashiya iya kuhlawulisa i-15% yesinyithi esimnyama kunye nesingenazintsimbi ukusuka nge-1 Agasti
I-Russia iceba ukurhafisa amaxabiso ethunyelwa ukuthunyelwa kwamanye amazwe okwexeshana kwizinyithi ezimnyama nezingafumani ntsimbi ukuqala kwinyanga ka-Agasti, ezokubuyekeza amaxabiso aqengqelekayo kwiiprojekthi zikarhulumente. Ukongeza kwiipesenti ezili-15 zerhafu esisiseko yokuthumela ngaphandle, uhlobo ngalunye lwemveliso lunento ethile. Nge-24 kaJuni, iSebe lezoQoqosho ...
Njengokuba amaxabiso entsimbi eqhubeka nokunyuka, isalathiso sentsimbi esenziwe ngenyanga (MMI) sentsimbi ekrwada sonyuke nge-7.8% kule nyanga. Ngaba ukulungele uthethathethwano lwesivumelwano sentsimbi sonyaka? Qiniseka ukuba uphonononge iindlela zethu ezintlanu ezilungileyo. Njengoko besibhale kwikholamu yale nyanga, amaxabiso entsimbi ebekhula ngokuqhubekekayo ukusukela kwimali yokugqibela ...
NgolwesiHlanu, ikamva le-ore yentsimbi liye lakhula kwiveki yesihlanu ilandelelana. Imveliso yentsimbi echasene nongcoliseko eTshayina, oyena mvelisi uphambili, yawa, kunye nokufunwa kwentsimbi kwihlabathi liphela, ukunyusa amaxabiso entsimbi ukurekhoda phezulu. Ikamva le-ore yentsimbi kwi-China's Dalian Commodity Exchange ivaliwe ...
I-ArcelorMittal iphinde yaphakamisa i-coil eshushu eshushu nge-20 eetoni, kunye nekhoyili yayo eshushu / idiphu eshushu eshushu nge-50 eetoni.
Umenzi wensimbi u-ArcelorMittal i-Yuropu wayinyusa isinikezeli sayo se-coil eshushu eshushu nge-20 / ngetoni (i-US $ 24.24 / ngetoni), kwaye yonyusa umnikelo wayo wokubanda nokubola okushushu nge-20 / ton ukuya kwi-1050 / ngetoni. Ton. Umthombo uqinisekisile kwi-S & P Global Platts ngokuhlwa kwango-Epreli 29. Emva kokuvalwa kweemarike ...
Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo ku-Epreli, iSebe lezeMali lakhupha isibhengezo malunga nokucinywa kwezaphulelo kwirhafu yokuthumela ngaphandle kwezinye iimveliso zentsimbi. Ukusukela nge-1 kaMeyi ka-2021, izaphulelo zerhafu yokuthumela kwelinye ilizwe kwezinye iimveliso zentsimbi ziya kurhoxiswa. Ixesha elithile lokuphunyezwa liya kuchazwa ngumhla wokuthumela ngaphandle ...